15 Mhizha dzeHalloween kuve nenguva inotyisa | Crafts On
15 Mhizha dzeHalloween kuva nenguva yakanaka
Isabel Catalan | 14/10/2021 18:00 | Mhizha dzeHalloween, Mhizha yevana
Halloween iri kuuya uye inguva yekugadzirira kupemberera nemhando! Zvakadii kutora mukana wekugadzira zvimwe Mhizha dzeHalloween supergirls dzekushongedza nadzo imba uye nekunakidzwa nguva? Mune ino posvo tinoongorora zvimwe zvehunyanzvi hwepakutanga kugadzira aya mazororo. Usapotsa!
1 Bat clip uye zvimwe sarudzo kupemberera Halloween gore rino
2 Muroyi akasvetwa padhoo - iri nyore raHalloween
3 Mutsvairo wemuroyi
4 Katsi nhema nekadhibhodhi
5 Kuputira machokoreti eHalloween
6 Nhema kadhibhodhi mummy yeHalloween
7 Halloween korona yekuita nevana
8 Monster pack yekupa zvihwitsi paHalloween
9 Nyore Halloween mummy yekuita nevana
10 Kenduru yeHalloween mune chimiro chemamu
11 Zvinonakidza lolly inonamira yeHalloween
12 Popcorn yeHalloween
13 Kadhi kadhibhodhi rakanaka
14 Katsi yeHalloween
15 Chidiki muroyi ngowani yeHalloween
Bat clip uye zvimwe sarudzo kupemberera Halloween gore rino
Tinotanga neizvi chiremwaremwa, imwe yeakareruka eHalloween emhizha ayo iwe aunogona kukurumidza kugadzirira nezvimwe zvinhu zvaunenge uinazvo kumba zvakaita semapuranga mbatya, mamaki matema, nhema kadhibhodhi, chigero, maziso ehunyanzvi uye pfuti yesilicone.
Iwe unogona kushandisa iyi bat clip semuenzaniso kuturika nemaketeni eimba, kusungirira mbatya pamutsetse wekupfeka kana kushongedza mabhuku emabhuku, pakati pezvimwe zvakawanda zvinoshandiswa. Mune iyo posvo Bat clip uye zvimwe sarudzo kupemberera Halloween gore rino iwe uchaona iyo mirairo yekuigadzira.
Muroyi akasvetwa padhoo - iri nyore raHalloween
Mumwe wevaroyi ndeimwe yetimu dzakabatana zvikuru nebato reHalloween. Ndokusaka isingakwanise kushayikwa kubva pane urwu runyorwa. Ini ndinounza imwe yeinonakidza kwazvo yeHalloween mhizha iyo iwe yaunogona kugadzirira mwaka uno uye iyo yaunogona kushamisika vashanyi vako kana iwe uchipemberera pati kumba. Ndiri kureva izvi zvinosetsa yakapwanyika-yakaita doormat, imwe yehunyanzvi hwakareruka kuita kumba.
Iwe unongoda chete bhutsu nemasokisi, makushingi anozadza uye doormat. Kuti uone maitirwo azvo ndinokurudzira kuti uverenge chinyorwa Muroyi akapwanyika padhoo kwaunowana nhanho nhanho.
Chimwe chishongo chisingakwanise kushayikwa kumba kupemberera zuva rakakosha iri mutsvairo wevaroyi. Kana iwe uchida kupa kwakasiyana kubata kune iko kushongedzwa kweimba, ini ndinokurudzira iwe kuti utangezve izvi Mutsvairo wemuroyi izvo zvausingazodi zvinhu zvakawanda. Muchokwadi, zvese zvaunofanirwa kuita kutora matavi mashoma uye imwe ribhoni kuti uasunge pamwechete. Izvo zviri nyore!
Nekudaro, kana iwe uchida kuona kuti zvinoitwa sei zvakadzama, ndinokuraira kuti uverenge chinyorwa Mutsvairo wevaroyi wekushongedza paHalloween.
Katsi nhema nekadhibhodhi
Varoyi 'vanofarira chipfuyo havagone kushayikwa kubva pane urwu runyorwa rweHalloween mhizha kana. Iyo yakasarudzika uye vana vachada kutora chikamu mukushongedza kweimba nekuita izvi zvakanaka katsi nhema iyo yavanogona kuisa mudzimba dzavo. Izvo zvinoitwa mujiffy uye zviri nyore kwazvo. Uye zvakare, inonyatso kufumurwa padhuze nemutsvairo wandinokuratidza muhunyanzvi hwapfuura.
Sezvinhu iwe uchafanirwa kutora makadhibhokisi matema uye rimwe vara raunoda, kugadzira maziso, glue uye chigero. Iwe unogona kuona kuti inogadzirwa sei mune iyo posvo Katsi nhema nekadhibhodhi. Uchazvida!
Vana vanoda zviwitsi uye chokoreti. Halloween inguva yakanakisa yekurega yako yekufungidzira ichimhanya musango uye kugadzirira macandi nemaumbirwo zvinoenderana nemusoro wenyaya. Semuenzaniso izvi vampire tarisa kuputira kuendesa mamwe machokoreti. Iwe uchashamisika vese vana nevakuru!
Iyi ndeimwe yehunyanzvi hweHalloween hwausingade zvinhu zvakawanda. Kadhibhodhi nhema uye yemaroni, maziso ehunyanzvi, tsvimbo yeglue, chokoreti bar uye chigero zvinokwana. Izvo zviri nyore! Kana iwe uchida kuona kuti zvinoitwa sei nhanho nhanho, usapotsa iyo posvo Kuputira machokoreti eHalloween.
Nhema kadhibhodhi mummy yeHalloween
Humwe hunhu chaihwo hwehunhu hweHalloween iwo mammies. Kana iwe urikugadzirira akati wandei eHalloween mhizha yegore rino, iyi haigone kupotsa kubva pane yako runyorwa! Icho chiri kadhibhodhi nhema mummy yakapusa kuita uye kuzviita haudi zvinoda zvinhu zvakawanda, ingori kadhibhodhi nhema nhema, penzura, eraser, chena mvere, hunyanzvi maziso, glue, chigero uye tepi.
Kana iwe uchida kuziva zvakadzama mirairo yeiyi hunyanzvi, ndinokurudzira kuti uverenge chinyorwa Nhema kadhibhodhi mummy yeHalloween.
Halloween korona yekuita nevana
Kana iwe uchitsvaga yeHalloween mhizha nekuti iwe unoronga kukanda pati, iri garland richakubatsira iwe kushongedza iyo kamuri kwauri kuenda kunopemberera iko. Zviri nyore kwazvo kuita uye zvakanakira kuti vana vatore chikamu uye vashande pamwe nekushongedzwa kwepati.
Zvinhu izvo zvauchazoda kugadzirira izvi kusetsa wreath Iwo matema uye orenji mapepa ekuvaka, tepi, penzura, chigero, eraser, uye imwe chena tambo. Kana iwe uchida kuona kuti zvinoitwa sei, usazeze kubaya pane iyo positi Halloween korona yekuita nevana uye ipapo iwe unowana iwo madanho nhanho nhanho.
Monster pack yekupa zvihwitsi paHalloween
Imwe nzira yekushamisa vadiki panguva yemabiko eHalloween ndeyekugadzira uye nekuparadzira ino inonaka diki-yakaita chikara package ine macandi. Vachachida! Ivo pachavo vanogona kutora chikamu mukugadzirira kwayo uye nekuvaendesa kune vamwe vashanyi panguva yemutambo.
Kuti uite izvi chikara chihwitsi pack Iwe unongoda mashoma ekushandisa: kadhibhodhi kubva mupepa remuchimbuzi mupumburu, maziso ehunyanzvi, makadhibhokisi ane mavara, chigero nepfuti yeglue inopisa. Tsvaga kuti zvinoitwa sei mupositi Monster pack yekupa zvihwitsi paHalloween.
Nyore Halloween mummy yekuita nevana
Uyu mummy ndeimwe yehunyanzvi hweHalloween zviri nyore kwazvo zvekuti kunyangwe vana vanogona kuzviita vega. Vachave nenguva inonakidza yekuita izvi mummy kushongedza kamuri yako kana chero imwe kona yeimba.
Kugadzira hunyanzvi uhu, unogona kushandisa zvimwe zvezvinhu zvauinazvo kumba kubva kune mamwe mabasa epamberi, akadai semakatoni emapepa etoilet, maziso anotakurika, rwonzi rwetambo chena, chigero, penzura uye zvishoma tepi. Kuti uone kuti zvinoitwa sei, usapotsa iyo posvo Nyore Halloween mummy yekuita nevana.
Kenduru yeHalloween mune chimiro chemamu
Kushongedza makamuri eimba uye nekupa mweya mweya, iwe unofungei nezvekuita ichi chinotonhorera kenduru chimiro mune mummy?
Iyo ndeimwe yeakanakisa uye akapusa emhizha eHalloween kugadzirira. Sezvinhu zveizvi kenduru Iwe uchafanirwa kutora chirongo chegirazi, mabhandiji, mamwe makenduru, maziso ehunyanzvi uye pfuti inopisa yeglue. Izvo zviri nyore! Kuti uone kuti uyu mummy anogadzirwa sei, tarisa pane iyo posvo Kenduru yeHalloween mune chimiro chemamu.
Zvinonakidza lolly inonamira yeHalloween
Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvakapusa zveHalloween zvekugadzirira nevana. Kutanga ivo vanofanirwa kudya mashoma maputi uye nematanda akasara ivo vanogona kugadzirira kunakidzwa uku chikara chakanakisa. Vachave nekufema zvechokwadi!
Zvimwe zvinhu zvekugadzira hunyanzvi izvi zvinofambisa maziso, glue, chigero, godo, tambo chena, makara ane mavara. Iwe unogona kuona maitirwo azvo mune iyo posvo Zvinonakidza lolly inonamira yeHalloween.
A classic isingakwanise kushayikwa mune chero pati yeHalloween mabhegi e themed popcorn. Iyi iri muchimiro chemasaga. Zviri nyore kwazvo kuzvigadzirira, nekuti izvi iwe uchazoda mashoma mapopuru, pepa rinoonekera, uta kuti usunge pasuru uye mucheki mutema kupenda dehenya.
Nekudaro, kana iwe uchida kuona kuti zvinoitwa sei nhanho nhanho ini ndinokuraira iwe kuti uverenge iyo positi Popcorn yeHalloween. Iwe uchavagadzirira mujiffy!
Kadhi kadhibhodhi rakanaka
Kana uine akati wandei makadhibhokisi mapepa anotenderera kumba uye iwe uchida kutora mukana iwo iwo kuti ugadzire hunyanzvi, izvi zvakanaka kadhibhodhi bat Iyo yakanaka pfungwa yekushongedza makamuri eimba. Shandisa dema, chena, yero bepa rekuvaka, chigero, glue, mucherechedzo, uye poda diki blush. Mhedzisiro yacho ichave yakanaka!
Kana iwe uchida kuona kuti inogadzirwa sei, tinya pane iyo positi Anonakidza bat kuti aite paHalloween nevana.
El katsi nhema Imhuka iyo inowanzozivikanwa neHalloween uye inopa yakawanda yekutamba kushongedza bato rerudzi urwu. Kana iwe uchida mhuka idzi, uhwu hunyanzvi hwaunogona kuwana nguva yakanaka uchigadzira. Izvo hazvina kunyanya kuomesa kuita asi zvinoda kuti utarise kune zvakadzama kuti zvionekwe zvakakwana.
Kuti uigadzire unozoda zvishandiso zvishoma (makadhibhokisi ane mavara, peni nhema, kambasi, machena machena mapaipi, chigero, penzura, mucherechedzo mutema, nezvimwewo) asi ndeimwe yemhizha dzeHalloween dzauchazove nenguva yakanakisa. Uye zvakare, unogona kuiturika chero mumba kuti itaridzike zvakanaka uye kunyangwe pamusuwo. Kana iwe uchida kuona zvakasara zvezvinhu uye vhidhiyo inoratidzira yekuti katsi iyi inoitwa sei nhanho nhanho, tarisa pambiru Katsi yeHalloween.
Chidiki muroyi ngowani yeHalloween
PaHalloween haugone kupotsa ngowani yevaroyi! Unogona kuzviitira pamba nezvinhu zvawakachengeta kubva kune dzimwe nguva uye vana vachada kutora chikamu mukugadzira nekuti ichi chidimbu chiri nyore kwazvo kuita.
Kuti uite izvi muroyi ngowani Uine kumeso kwedatya iwe unongoda zvishandiso zvishoma: nhema kadhibhodhi, furo mune akasiyana mavara, penzura, chigero, kambasi uye zvimwe zvinhu. Kana iwe uchida kuziva zvakasara zvezvinhu uye iwo mirairo yekugadzira iyi inonakidza ngowani hat, usapotsa posvo Chidiki muroyi ngowani yeHalloween. Ichave imwe yehunyanzvi hweHalloween iyo vana vachanyanya kufarira!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mhizha On » Crafts » Mhizha yevana » 15 Mhizha dzeHalloween kuva nenguva yakanaka
Vintage zvirongo zvekushongedza